Pôlitika – Politika
Étiquette : <span>Pôlitika</span>
25 août 20197 mai 2020Politika
Sahala ny zava-misy any amin’ny ankamaroan’ny firenena afrikana samihafa, mbola fanamby lehibe eo amin’ny fitantanana ara-demokratika ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy eto Madagasikara. Ao anatin’ny fiomankomanana ny amin’ny anatanterahana ny fifidianana Solombavambahoaka eto Madagasikara, dia fantatra tamin’ny fanambarana nataon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), fa tsy misy afa-tsy ny 15%-n’ireo kandidà milatsaka ho fidiana no...
20 août 20197 mai 2020Matoan-dahatsoratra
Mofo sy lalao: ampy ve izany?
Madagasikara, volana jolay 2019: miasa amim-pilaminana, tsy misedra fahasarotana firy ny governemanta vaovao taorian’ny fifidianana filoham-pirenena, manatanteraka sahady ny asa voasoratra ao anatin’ny drafitrasa ho fisandratan’ny firenena. Nazava ny voka-pifidianana solombavambahoaka, vitsy dia vitsy ny tsy fahatomombanana tamin’izany. Enim-bolana taorian’ny fisian’ny fahabangan’ny solombavambahoaka dia miverina mandray ny asany indray ny Antenimierampirenena. Maka ny toerana ihany...